Budata KeyLock maka Windows
Free Budata maka Windows (4.30 MB)
KeyLock bụ mmemme mkpọchi kọmputa nke ndị na-achọghị isoro ndị ọrụ ndị ọzọ kerịta kọmputa ha nwere ike iji nefu. Ekele maka mmemme a, ị nwere ike igbachi kọmputa gị site nenyemaka nke ebe nchekwa USB ma kwe ka ndị dị iche iche nweta kọmputa gị.
KeyLock, nke bụ mmemme dị oke nchebe, na-egbochi gị ịnweta onye njikwa ọrụ wee rụọ ọrụ ndị ọzọ mgbe akpọchichara kọmputa. Mgbe imepere mkpọchi azụ, ihe niile na-alaghachi ngwa ngwa. Iji kpọghee kọmputa gị, naanị tinye USB flash mbanye na kọmputa gị. Ekele maka sistemụ ahụ, nke bara uru na ntụkwasị obi karịa njirimara mkpọchi paswọọdụ achọtara na ntọala ọkọlọtọ nke Windows, ị nweghịzi ichegbu onwe gị maka ịhapụ kọmpụta gị.
Ihe omume a, nke nwere atụmatụ nchekwa ike nonwe ya, na-enye ohere karịsịa ndị na-eji laptọọpụ rie obere batrị. Ya mere, enweghi oke ike oriri maka mmemme mgbakwunye.
Ihe omume a, nke na-enye gị ohere ịtọ ihe ngosi desktọpụ dị iche iche maka ihuenyo mkpọchi, na-enye gị ohere ịnye ndị mmadụ ị chere na ha nwere ike ịnwa imeghe kọmputa gị.
Ọ bụrụ na ị na-ahapụkarị kọmputa gị ma achọghị ka ndị ọzọ rute kọmputa gị, ịnwere ike iji mmemme KeyLock nenweghị nsogbu.
Nha faịlụ: 4.30 MB